आजबाट छठपर्व शुरु - Nice Samachar
आजबाट छठपर्व शुरु
३ मंसिर २०७७, बुधबार १३:५९ 118 पटक हेरिएको
काठमाडाैं । नदी र सूर्यको श्रद्धा भक्तिपूर्वक पूजा गरी मनाइने छठपर्व आजदेखि शुरु भएको छ ।
कात्तिक शुक्ल चतुर्थीदेखि सप्तमीसम्म चार दिन मनाइने सूर्यको आराधना, उपासना र पूजाको पर्व आज स्नान गरी चोखो खाएर बसिन्छ ।
कात्तिक शुक्ल चतुर्थीका दिन आज बिहान बर्तालुले स्नान गरेसँगै यो पर्वको विधि शुरु हुन्छ । चतुर्थीको कर्मलाई अरबाइन वा अरबा भनिन्छ । यस दिनदेखि छठपर्व नसकिएसम्म बर्तालुले माछा, मासु, लसुन, कोदो, फापर, मुसुरो, आदि खान नहुने भनाइ छ ।
मनोकाङ्क्षा पूरा हुने विश्वासमा विशेषगरी महिलाले छठमा कठोर व्रत गर्छन् । तराईमा उत्साहका साथ मनाइने मिथिला संस्कृतिमा आधारित छठपर्व वि.सं. २०४६ पछि काठमाडांैँ लगायत पहाडमा मनाउन थालिएको हो ।
सूर्य उपासनाको पर्व भएकाले पहाडी समुदाय पनि यसप्रति आकर्षित भएका छन् । वि. स.ं २०६३ पछि भने काठमाडौँको थापाथली, गुह्येश्वरी, गौरीघाट र रानीपोखरीमा पनि विशेष महत्व एवं साजसज्जाका साथ यो पर्व मनाउन थालिएको छ ।
यस वर्ष कात्तिक शुक्ल षष्ठी अर्थात् मङ्सिर ५ गते शुक्रबार बेलुकी अस्ताउँदो र सप्तमी अर्थात् मङ्सिर ६ गते शनिबार बिहान उदाउँदो सूर्यलाई अघ्र्य दिइन्छ । कोरोनाका कारण राजधानीमा विगतका वर्षजस्तो छठको रौनक छैन । यस वर्ष भने कोरोना भाइरसका कारण राजधानीका छठस्थलमा विधिमात्र पूरा गर्न प्रशासनले आह्वान गरेको छ ।
गुरुनानक जयन्ती विविध कार्यक्रम
भगवान विष्णुको प्रतीक तुलसीको
आज दनुवार समुदायको बरकी
नगरप्रमुखलाई कोरोना देखिएपछि सेवा